Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Jasiiradaha Seychelles: Shaqadaada Utopia
Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Shirarka • News • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Markay nolosha shaqadu mar kale is beddesho, xirfadleyda iyo reer guuraaga dhijitaalka ah waxay hadda haystaan ​​fursad ay iskugu daraan shaqada iyo fasaxyada jasiiradaha Seychelles, hoygaaga janno. Ka fogaanshaha iftiinka macmalka ah ee shaashadahaaga iyo ka -tegidda xafiiska caadiga ah iyo qaababka shaqada isku -dhafka ah ee loo galayo iftiinka qorraxda leh ee jannada cad ayaa laga yaabaa inay dib u soo ceshato dhimbiilkii hal -abuurka ahaa ee aad raadinaysay.
Aragti cusub ayaa Seychelles ka dhigaysa meel loo socdo oo abuureysa meel gaar ah oo dib loogu soo nooleeyo loona shaqeeyo.
Meel casri ah oo ammaan ah, jasiiraduhu waxay bixiyaan jawi ku habboon shaqada hufan.
Bal qiyaas inaad ka shaqayso jawi leh xeebo xasilloon oo deggan iyo kaymaha roobabka kulaylaha ah oo kaliya cagaha.
Muddo tobanaan sano ah, jasiiradaha Badweynta Hindiya waxay marin habaabin jireen dadka socotada ah xeebaheeda bacaadka ah, taasoo ku kasbatay jasiiradaha Seychelles sumcadda inay ka mid tahay meelaha loogu doonista badan yahay dhulka. Iyada oo leh goobteeda ugu fiican, quruxda dabiiciga ah ee aan fiicnayn iyo martigelinta qaar ka mid ah xeebaha ugu caansan adduunka, ayaa lagu daray cabbir cusub oo hadda Seychelles ka dhigaya meel loo abuuro meel gaar ah oo dib loogu soo nooleeyo loona shaqeeyo!
Runtii, Adduun kale, Seychelles waxay ku faantaa dheri dhalaalaya dhaqammo leh dad saddex -luqadle ah halkaas oo soo -booqdayaasha ay ku soo dhoweeyaan soo -dhoweynta diirran ee diirran oo si aan kala go 'lahayn ugu dhex milmaan nolosha jasiiradda. Meel casri ah oo badbaado leh, jasiiraduhu waxay bixiyaan jawi ku habboon shaqada hufan leh xasilloonida, xeebaha cidlada ah iyo kaymaha roobabka kuleylaha ah oo kaliya cagaha.
Dib ula xiriir naftaada hal abuurka leh iyo Dabeecadda Hooyada. Marna ma ahan goor hore in laga fikiro halka lagu bixinayo jiilaalka soo socda, oo leh cimilo diiran oo aad u badan oo la damaanad qaaday sanadka oo dhan, Seychelles waa meesha ugu habboon ee looga baxsan karo magaalooyinka mashquulka badan iyo cimilada qabow oo aan loo baahnayn tallaal iyo halka fiisooyinka lagu siiyo imaanshaha.
Nabadgelyadu waxay muhiim u tahay hawl-wadeennada dalxiiska iyo hay'adaha qaadanaya tababar adag iyo shahaado si ay u noqdaan COVID-safe iyo dad ku faanaya mid ka mid ah tallaallada ugu sarreeya adduunka.
Waxaa ku hareereysan ubaxyo iyo xayawaanno u gaar ah iyo hoy badan oo laga kala dooran karo, jasiiradaha Seychelles waxay abuuraan jawi ku habboon inay isku daraan ganacsiga iyo raaxada. Tiro ka mid ah tas-hiilaadka hoyga firaaqada ayaa la baaray oo la xaqiijiyey inay ku habboon yihiin ujeeddooyin 'shaqo', oo ka kooban huteelo xarrago leh, guryo raaxo leh, hoteello raaxo leh iyo guryo martida oo dhab ah ayaa wax u qaban kara dadka reer guuraaga ah ee dhijitaalka ah iyo kuwa shaqada iyo sidoo kale socdaalka ku wajahan ganacsiga. Wax kasta oo dhadhankaaga ama miisaaniyaddaada ah, waxaad ka faa'iideysan kartaa kaabayaasha casriga ah, adeegyada iyo ikhtiyaarada madadaalada ee hal goob oo aan caadi ahayn.
Ka dhig booqashadaada xigta Seychelles khibrad shaqo! Haddii aad tahay socotada kaligiis ah, lammaane, ama qoys, jasiiradeennu waxay kugu martiqaadayaan inaad ku dhiirrigeliso hamigaaga safarka adigoon dayacin shaqadaada.
Soo ogow sida aad Seychelles uga dhigi karto goobta shaqadaada https://workcation.seychelles.travel/